Dijet Fekitori | China Dijet Vagadziri, Vatengesi
Japan yakaita Dijet APMT inoisa yekugaya carbide inoisa APMT1604PDER-08 JC5218
Zvimiro zveDijet yekugaya carbide inoisa: 1.Original Dijet brand kubva kuJapan. 2.Dijet yekugaya carbide inoisa yakakodzera machining simbi, simbi isina simbi, simbi yakakandwa. 3.Dijet yekugaya carbide inoisa ine huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvekucheka, hwokugaya uye tambo. Kugadzikana uye chengetedzo yeDijet yekugaya carbide inoisa iri mukutenderera kune zvibereko. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeDijet yekugaya carbide inoisa mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Kunyanya ...
Japan Dijet carbide inoisa yekugaya ekucheka maturusi BNM-200 DH103
Zvakanakira Kubatsira: 1) .Makwikwi Emitengo 2) .Good Performance 3) .Short Dhirivhari Nguva 4) .Quality Inodzorwa 5) .Small Orders Inogamuchirwa Japan Dijet carbide inoisa yekugaya ekucheka maturusi Maitiro: 1) .Original Japan Dijet brand; 2): 3) .High kuomarara uye yakanakisa kupfeka-resistace; Kugadzikana uye chengetedzo mukubudirira kutendeuka; 5) .High kuomarara uye pasi kucheka simba; 6) .Pisa kupisa uye kureba t ...
Dijet cnc chishandiso chekugaya RPMW1003MO JC5118
Zvimiro zveDijet cnc chishandiso chekugaya: 1.Original Dijet brand kubva kuJapan. 2.Dijet cnc chishandiso chekugaya chakakodzera machining simbi, simbi isina simbi, simbi yakakanda. 3.Dijet cnc chishandiso chekugaya chine huwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye tambo. Kugadzikana uye chengetedzo yeDijet cnc chishandiso chekugaya iri mukutenderera kune zvibereko. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeDijet cnc chishandiso chekugaya mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Rondedzero yeDijet cnc chishandiso chekugaya: ...
Dijet Kucheka Kuisa Yakagadzirwa muJapan WDMW080520ZTR JC8118
Dijet Ezvemutauro wemari mazita: DIJET INSETRS MUENZANISO WOKUTEVEDZERA 11414-Z9447 JC5015 SEMT13T3AGSN-PM JC8015 APMT1135PDER-08 JC8050 TNMG160404L-GNP CX75 APMT1604PDER-08 JC5118 TNMG160404R-SG JC5015 BNM080 JC4015 WCMX030208 JC215V BNM-200 JC8003 WCMX080412 JC215V CNMG120408-PG JC215V WDMW050316ZTR JC8015 DCET11T301R -MF JC5015 WDMW05316ZTR JC8015 DNMG150404-PG JC325V WDMW06T320ZTR JC5040 EDNW10T3TN-10 CY250 WDMW06T320ZTR JC8015 EOMT060210ZER JC5118 WDMW080580 WDMW08051280 WDMW08050